Sony Eletrọniki na-ebuputa ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na G Master ™ Usoro ntanetị zuru ezu na Lightweight na Compact 35mm F1.4 G Master ™ | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Mmepụta Ihe » Sony Elektrik na-ebuputa ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na G Master ™ Usoro ntanetị zuru ezu na Lightweight na Compact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Elektrik na-ebuputa ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na G Master ™ Usoro ntanetị zuru ezu na Lightweight na Compact 35mm F1.4 G Master ™
Sony Electronics Inc. taa kwupụtara FE 35mm F1.4 GM (ihe atụ SEL35F14GM) - ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na nsonye G Master nke toro eto zuru ezu - na-ebupụta ụdị onyonyo izizi nke mbụ na mma bokeh na kọmpat na fechaa. Mgbe ejikọtara ya na igwefoto E-Mount, oghere na-enye SonyIke nke ụlọ ọrụ na - eduga AF (autofocus) - zuru oke maka ọtụtụ ojiji dị ka agbapụ ala, eserese na foto n'okporo ámá, maka ma oge ma vidiyo.
"Mgbe Sony, ebumnuche anyị bụ imejupụta ụwa na mmetụta uche site n'ike nke okike na teknụzụ ka anyị wee kee FE 35mm F1.4 GM iji wepụta oge dị mkpa iji zọpụta ruo mgbe ebighi ebi, "ka Neal Manowitz, osote onye isi oche maka Imaging Products and Solutions America kwuru. Sony Elektrọnik. "Site na iji ọmarịcha mkpebi na ọgụgụ isi na-elekwasị anya na nkà na ụzụ, niile na obere, fechaa imewe, nke a bụ oké mkpa lens na-adịghị imebi na oyiyi mma."
Mkpebi Pụrụ Iche Na Mpempe Nkọwa
SonyỌdịdị ngwa anya dị elu na teknụzụ nrụpụta na-eweta mkpebi pụrụ iche, bokeh mara mma, yana arụmọrụ na-elekwasị anya nke ọma na oghere kọmpụta nke dabara na nkwụ nke aka gị, na-atụle naanị 18.5 ounces (524 gram) na tụọ 3 sentimita asatọ dia. x 3 ⅞ sentimita asatọ (76 mm dia. x 96 mm) na a nyo dayameta nke Φ67mm. FE 35mm F1.4 GM na-egosipụta teknụzụ ngwa anya dị elu nke na-eweta ọdịiche dị iche na oke mkpebi. Abụọ XA (oke aspherical) ihe dị irè na-enwe mkpebi siri ike na mpaghara oyiyi ahụ. Ekele maka ihe ndị ọzọ dị na iko ED na ihe nyocha ndị ọzọ, FE ọhụrụ 35mm F1.4 GM na-eme nke ọma na ọkụ siri ike site na igbochi mmechi nke chromatic na odo odo maka nsonaazụ dị egwu.
Mara mma Bokeh
FE 35mm F1.4 GM na-enyefe oghere nke gbara okirikiri n'ihi ekele ya nke 11-agụba - ọkwa dị obere nke obere maka oghere kọmpat. Spherical aberration akara na ma imewe na n'ichepụta nkebi-eme ka ndị mara mma bokeh - a mbinye aka e ji mara nke Sony'S G Master oghere ntinye.
Ihe XA abuo abuo na-enye aka na ndi di nso na ezigbo ihe di nma. Nchikota nke oghere F1.4 kachasị na mgbanwe iji họrọ oke ịgba egbe zuru oke (anya elekere kachasị nke naanị 10.6 sentimita (27cm) yana ogo dị elu nke 0.23x na ọnọdụ autofocus) na-enye ohere maka njikwa kachasị na bokeh dị egwu mgbe ị na-agbapụ ma abụọ. na vidiyo.
Advanced Lekwasịrị Anya N'ihi Enwekwukwa imagery
Abụọ n'ime Sony'XD (nke siri ike) Linear Motors na-enye arụmọrụ dị elu dị mkpa maka AF (autofocus) na nsuso - na-ebute mkpebi pụtara ìhè na ebe ọ bụla. Nchịkwa algorithms nke oge a, mepụtara kpọmkwem maka XD Linear Motors, meziwanye nzaghachi nchịkwa na nkenke ma na-ebelata mkpọtụ na mkpọtụ maka arụmọrụ AF ngwa ngwa, dị mma ma dịkwa jụụ.
Enwere ike inweta nlezianya dị elu mgbe ị na-agbapụ na ọnụego dị elu.
Linear Response MF ana achi achi na mgbado mgbanaka zara aghụghọ ụzọ mgbe na-elekwasị anya na aka na ezigbo maka okike elekwasị anya mmetụta mgbe agbapụ video. Mgbanwe mgbanaka a na-elekwasị anya na-atụgharị ozugbo na mgbanwe kwekọrọ na mgbado, yabụ njikwa na-enwe mmetụta ozugbo.
Professional Control Ma a pụrụ ịdabere
FE 35mm F1.4 GM na-enye njikwa ọkachamara zuru oke gụnyere mgbanaka oghere na mgbapụ pịa gbanwere, bọtịnụ njigide nwere ike idobe yana ngbanwe ọnọdụ elekwasị anya nke na-akwado nkwado niile, ịrụ ọrụ nke ọma. Enwere ike ekenye bọtịnụ njigide ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ site na menu ahụ igwefoto, na-enye ohere ịnweta ọrụ dị oke mkpa nye ndị na-ese foto na ndị na-ese vidio.
Mgbe etinyere na igwefoto APS-C ma ọ bụ Super 35, kọmpat na fechaa FE 35mm F1.4 GM nwere ike iji dị ka ọkọlọtọ oghere Ẹkot 52.5mm zuru-etiti Ẹkot n'akuku nke na-ele, na-eme ya na ya zuru oke oke maka na-eke videos. Ihe mgbakwunye vidiyo ndị ọzọ gụnyere oghere de-clickable, ngwa ngwa linear AF na usoro nzaghachi usoro usoro.
FE 35mm F1.4 GM na-egosipụta uzuzu na mmiri na-eguzogide ọgwụ[I] imepụta ihe mkpuchi fluorine n'ihu nke na-egbochi mmiri, mmanụ na mmetọ ndị ọzọ.
Ọnụahịa na nchọta
Ọhụrụ FE 35mm F1.4 GM ga - adị na Febụwarị ma ree ya ihe dịka $ 1,399.99 USD na $ 1,899.99 CAD. A ga-eresị ya dị iche iche SonyNdị ikike nyere ikike na North America.
Nanị akụkọ na-akpali akpali ọhụrụ ọdịnaya gbara na ọhụrụ oghere na SonyEnwere ike ịchọta ngwaahịa ndị ọzọ na imaging www.alfauniverse.com, saịtị emere iji kụziere ma gbaa ndị niile na-azụ ahịa na ndị ahịa ume Sony α - Alfa ika.
New ọdịnaya ga-gwa ozugbo na Sony Osisi foto. Maka nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa, biko gaa na:
A ngwaahịa vidiyo na FE ọhụrụ 35mm Enwere ike ile F1.4 GM anya EBE A.
Banyere Sony Eletrọniki Inc.
Sony Elektrọnik bụ ụlọ ọrụ nke Sony Corporation nke America na Mgbakwunye nke Sony Corporation (Japan), otu n'ime ụlọ ọrụ ntụrụndụ zuru oke n'ụwa, nwere pọtụfoliyo nke gụnyere elektrọnik, egwu, ihe nkiri eserese, mkpanaka, egwuregwu, robotik na ọrụ ego. Isi ụlọ ọrụ ya na San Diego, California, Sony Elektrọnik bụ onye ndu na eletrọniki maka ndị ahịa na ahịa ahịa. Rationsrụ ọrụ gụnyere nyocha na mmepe, injinia, ahịa, ahịa, nkesa na ọrụ ndị ahịa. Sony Eletrọniki na-emepụta ngwaahịa ndị na-agbanwe ma na-akpali ọgbọ dị iche iche, dị ka ihe nrite igwe na-agbanwe agbanwe nke Alpha na ngwaahịa mgbanyụ ngwaahịa dị elu. Sony bụkwa onye nrụpụta ihe nrụpụta njedebe site na njedebe 4K ọkachamara na ngwa A / V na ụlọ ọrụ na-eduga 4K na 8K Ultra HD TV. Nleta www.sony.com/news maka ozi ndị ọzọ.
[I] Agaghị ekwe nkwa 100% ájá na mmiri.
Previous: NDR nke Germany na - ejikọ Studio Studio nke CGI nke 2.0 maka Studio ọhụrụ na Hamburg
Osote: Aviteng esonyere Cinegy AŞ Business Partners